‘तपस्वी’ भनिएका बम्जनको आश्रममा प्रहरीले सुरु ग¥यो अनुशन्धान ! « News24 : Premium News Channel
‘तपस्वी’ भनिएका बम्जनको आश्रममा प्रहरीले सुरु ग¥यो अनुशन्धान !
काठमाडौं । ‘तपस्वी’ भनिएका रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–६ बाँडेगाउँस्थित टोड्के जंगलमा रहेको आश्रममा प्रहरीले अनुशन्धान थालेको छ ।
फरेन्सिक विज्ञसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) आश्रम परीशरमा खोजतलाश गर्दा ३ सय मीटरको दुरीमा ९ वटा नुनको प्याकेटका खोल भेटिएको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक बिमलराज कँडेलले बताए ।
यससँगै आश्रमबाट हराएका भनिएका सञ्चलाल वाइबाको हत्या भएको आशंका झन बढेको छ । मृत शरीरलाई छिटो गलाउन नुन प्रयोग गरीन्छ । खोल भेटिएको ठाँउमा मानव कंगाल भने भेटिएको छैन ।
सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले बाबु खोजीपाऊँ भनी बिहीबार जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। सञ्चलालकाछोराले आफ्नो बुवालाई कुटेर मारेको आरोप लगाएका छन् ।